Layma's World: “လေးမ” … ရှင်းလင်းပွဲ(ပ)
နေရာ - www.layma-layma.blogspot.com …၊
အချိန် - ညအချိန် …၊
ရှင်းလင်းသူ - အမည်မဖော်လိုသူ “လေးမ” …၊
တက်ရောက်သူများ - ပြည်တွင်းပြည်ပမှ ဘလောက်ဂါကြီးများ ၊ ဘလောဂီကြီးများ နှင့် သတင်းထောက် “လေးမ” … ၊
အကျွေးအမွေး - အတွေးများဆူပွက်လာလျှင် ခပ်သောက်နိုင်ရန် လက်ဖက်ခြောက်ပုလင်း အဆင်သင့်ထားပေးမည် …. ၊
ရှင်းလင်းပွဲကျင်းပရသည့် ရည်ရွယ်ချက် - “လေးမ” အသစ်လဲလိုက်သော အခွံနှင့်ပတ်သက်၍ လူအများ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း သိစေရန် ၊ post များအတွက် ပေးထားသော label များနှင့်ပတ်သက်၍ “လေးမ” ၏ သဘောထားအမှန်ကို လာလည်သူများ သဘောပေါက်နိုင်စေရန်… ၊
အထူးသတိပေးချက် - တက်ရောက်လာသူများအနေဖြင့် သိလိုသည်များကို comment တွင် လွတ်လပ်စွာမေးမြန်းနိုင်သည် …၊ သို့ သော် “လေးမ” အကြပ်ရိုက်စေမည့် မေးခွန်းမျိုး လုံးဝမေးမြန်းခွင့်မပြု … မေးမြန်းခဲ့လျှင် “ မဟုတ်ပါဘူး ” ဟူသော စကား လေးလုံးမှလွဲ၍ အပိုဖြေကြားခြင်းပြုမည်မဟုတ် … ၊
တွေ့ အောင်ရှာပါသည် … တွေ့ ပါသည် … ကူးထည့်လိုက်ပါသည် … ။ အဖြူရောင်စာရွက်မှာ “လေးမ”၏ ခံယူချက်ကို ကိုယ်စားပြုပါသည် … တနည်းအားဖြင့် “လေးမ” ၏ စာမျက်နှာသည် ဓါတ်ပြယ်နေသော အဖြူရောင် စာမျက်နှာဟု ဆိုလိုသည် ….။ ရောင်စုံခဲတံများသည် အတွေးရောင်စုံကို ရည်ညွှန်းပါသည် … အကြောင်းအရာ တစ်မျိုးတည်း … ရည်ရွယ်ချက် တစ်မျိုးထဲ မတွေးပါ ….မရေးပါ … အရောင်တွေ စုံချင်ပါသည် ….။ ရေးခြစ်ပြီးသားကို ရှာ ထားရခြင်းမှာ ... ရေးပြီးသွားခဲ့ပြီ … အရောင်စုံ ခြယ်ပြီးသွားပြီဟု ဆိုလိုသည် …. ရေးဆွဲထားသည့် ရောင်စုံလိုင်းများမှာ ဒီဇိုင်းတစ်ခု အနေဖြင့် ပီပီပြင်ပြင်မရှိ …. တနည်းအားဖြင့် အဆုံးမရှိသော မျဉ်းကွေးများ ….၊ ဆက်ဆွဲနေဦးမည့် မျဉ်းကွေးများ…ဖြစ်သည် ….။ မျဉ်းဖြောင့်မဟုတ်သော မျဉ်းကွေးများသည် rigid မဟုတ်သည့် flexible အသွင်ကို ဆောင်သည် ….။
Posted by Layma at 6:43 PM
Labels: Analysis, News, That's what I wanna say
ကိုယ်တိုင်ရေး ကိုယ်တိုင်ဗျူး ကိုယ်တိုင်ရှင်းလင်း ဂါတ်ဒ်တယ်ဟေ့...ဆက်ရေး အားပေးတယ်...